Reero reer Miyi ah oo ay Mireen Ciidan Beeleedka Jwxo-shiil iyo Ciidanka Xukuumada Eritrea – Rasaasa News
Jul 23, 2009 Eritrea, Jwxo-shiil, Ogaden
Ciidamada xukuumada Eritariya oo markii hore taageero xirfadeed siin jiray Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] , ayaa Haatan la wareegay Dhaqdhaqaaqa Xoreynta dhulka Somalida Ogadeeniya oo dhibaatooyin xoog leh ku haya dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Wararka naga soo gaadhaya dhulka Somalida Ogadeeniya, gaar ahaana degmada Jijiga ayaa waxay rumaynayaan in habeen hore xili habeenimo ah reer degan dooxada biya cade oo ah meelaha uu ka soo bilowdo toga Faafan oo ay degan yihiin beelo Absakuul reer Yaasuf in ay dhibaato u gaysteen ciidan beeleedka Jwxo-shiil.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa reerka weerar ku soo qaaday rag hubaysan, waxayna dileen 12 nin waxayna dhaawaceen 14 ruux oo isugu jira haween iyo caruur. waxaa qaylo soo gaadhsiiyey Qabri-bayax reer kale oo degaankaas deganaa. Waxaana dhaawac intooda badan la keenay oo lagu daweynayaa magaalada Jijiga, mana jiraan war madax banaan oo ka soo baxay dadka dhaawaca ah.
Waxaa baryahanba soo kordhayey dhibaatooyinka ay dadweynaha u gaystaan ciidan beeleedka Jwxo-shiil oo ay gacan siinayaan xubno ciidanka Eritariya ah, oo iyagu inta badan amarka bixiya. Tan iyo intii uu khilaafku kala jabiyey Jwxo ee uu gacan ka hadalku dhex maray, ayaa waxaa meesha ka baxay Jabhadnimadii ururka Jwxo, waxaana xukuumada Eritariya u soo baxday in ayna ka ciil bixi karin xukuumada Tigray oo ay colaadi dhextaal, hadii ayna helin dad sheeganaya Jwxo oo sii wada dhibaatada dhulka Somalida Ogadeeniya.
Sidda runtu tahay ma jiraan ciidan isku xidhan oo Jwxo ah oo u dagaalamay mabaadii Jabhadnimo oo dan u ah dadweynaha somalida Ogadeeniya, balse waxaa jira ciidan beeleed ka soo hadhay ciidankii xooga lahaa ee Jwxo ee ku dagaalami jiray qaaraanka dadweynaha.
Hadaba, si ay xukuumada Eritariya ay uga aargoosato colaada dhextaal iyada iyo Itobiya ayaa waxaa ay isticmaalaysaa ciidan beeleed uu wato Jwxo-shiil. Ciidanka ayaa waxay iska dhigaan Jwxo, waxayna dilaan dadweynaha reer miyiga ah, waxayna xoog kaga qaataan xolahooda.
Hadaba, kolkii ay arkeen dadweynuhu in ayna cayminaynin ayey gabalada qaarkood bilaabeen in ay iska celiyaan, waxayna xukuumada Itobiya waydiisteen in ay u sharciyeyso Qoryahooda.
Beesha Abasguul reer Yaasuf oo ay xurgufi dhextaalay beesha Jwxo-shiil, ayey ciidan beeleedka Jwxo-shiil dhawr goor waxyeelo u gaysteen, waxayna beeshaasi bilowday in ay iska celiso ciidan beeleedka sheegta Jwxo.
Todobaadkii hore ayaa ciidan beeleedka laga dilay todoba ka mid ah, arinta habeen hore dhacdayna waxay jawaab celin u tahay dilka todobaadkii hore dhacay.
Hadaba, arinta habeen hore dhacday ayaa waxay u eg tahay gumaad waayo reerka oo hurda ayaa la soo galay oo lagala baxay 12 nin waana la dilay, kolkii ay reerku qaylyeena waxaa lagu furay xabad keentay dhaawac 14 ruux ah.
Saddexdii todobaad ee ina dhaaftay, ayaa gabalka Qoraxeey iyo Nogob waxaa ka dhacay dilal kala duwan, waxaana gaystay ciidan beeleedka Jwxo-shiil oo ay taageerayaan cutubyo ka tirsan ciidamada Eritariya.
Hidii, ay sii socdaan dilalka noocan ah oo uu masuulka ka yahay Jwxo-shiil, ayaa waxaa khasab noqon doonta in ay abuurmaan ciidan beeleedyo isku daya in ay difaacaan beelahooda, waana suurto gal in uu aloosmo dagaal sokeeye kaas oo aanu had iyo goorba ka digno
rasaas baa runta sheega, oon beenba raad ku lahayne rafiiqaaga ka yeelo
Dhurwaa Dhuumasho Hoosiyo Dhuruq Dhaaruq Ma Daayo Doqona Aan Dhug Lahayna i Dhayaayda ma Daayo